I-Alaska Airlines ikhupha iSan Francisco Giants-themed Airbus A321
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Alaska Airlines ikhupha iSan Francisco Giants-themed Airbus A321
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • ukonwatyiswa • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Sports • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Alaska Airlines ibhengeza ukukhwela kwangoko kwiindwendwe ezinxibe iimpahla zaseSan Francisco Giants ngokudlala emva kwexesha lonyaka.
I-Alaska Airlines liqabane elisemthethweni lenqwelomoya kwiqela laseSan Francisco Giants.
Le yinqwelomoya yesibini yeAlaska Airlines enezinto ezinikezelwe kwiSan Francisco Giants.
Inqwelomoya nenombolo yomsila u-N855VA iya kubhabha kwinethiwekhi yeAlaska Airlines ngoku ukuya kuthi ga ngo-2022.
I-Alaska Airlines, iqabane elisemthethweni lenqwelomoya yenqwelomoya yeSan Francisco Giants, ithatha imibhiyozo yasemva kwexesha lonyaka kwiindawo eziphakamileyo kunye ne-livery yayo entsha yeGiants-themed livery. Ngexesha nje lokubaleka okuzayo, inqwelomoya iAirbus 321 yaziswa namhlanje kubalandeli abashiya iSan Francisco (SFO) eSeattle (SEA).
“Zimbalwa izinto ezinomdla njengokubona esi sigebenga sikhulu, simibalabala sibhabha kwilizwe lethu elihle njengoko sisiya kumdyarho wethu wokudlala. Ithemba lam lelokuba le nqwelo-moya inika abalandeli beGiants indlela yokuziva beyinxalenye yeqela, ngalo lonke ixesha behamba, ”utshilo Isigebenga saseSan FranciscoCEO kunye noMongameli Larry Baer. Intsebenziswano njengokuba sinayo Inqwelo moya yaseAlaskainikezela ngenkxaso ebalulekileyo kuluntu lwasekhaya, ulutsha kunye neenkqubo zemfundo ezifana neWillie Mays Scholarship Fund kunye neGiants Community Fund, ethi yona incede ukutshintsha ubomi bolutsha lwethu. ”
Esi sisibhengezo sesibini esinikezelwe kwifayile ye- Iziqithi zaseSan Francisco. Inqwelomoya, inombolo yomsila u-N855VA, iya kubhabha kwinethiwekhi yeAlaska ngoku ukuya kuthi ga ngo-2022. I-livery enesihloko esitsha yenye yeendlela ezininzi zeendwendwe ezinokubhiyozela umdlalo weqela lokudlala. Iinqwelo-moya zaseAlaska Ndisandula ukubhengeza ukuba abalandeli abanxibe iimpahla zikaGiants banokukhwela kwangethuba kuyo yonke iSan Francisco abahamba ngeenqwelo moya ngalo lonke ixesha lokudlala komdlalo weqela.
Abasebenzi baseAlaska banikezela inqwelomoya kunye neetsheki ezingama-100,000 kwiNgxowa-mali yeWillie Mays Scholarship, ngembeko ye-'Say Hey Kid 'engama-90th usuku lokuzalwa. Ingxowa-mali iyanceda ekwenzeni iminqweno yekholeji izaliseke kulutsha oluMnyama lwaseSan Francisco kwaye ibanika amandla okuba balandele iinjongo zabo zokuphumelela kwisikolo esiphakamileyo, kwikholeji nangaphaya. Amaphetshana e-Terminal 2 nawo aphathwe kumthendeleko ongalindelekanga ogqitywe ngokuzonwabisa kwe-DJ kwindawo, amabhaso, ukunika kunye notyelelo lwemascot yeGiants "uLou Seal" ojoyine kwimibhiyozo.
"IAlaska ibe liqabane elinekratshi lamaGiants ukusukela ngo-2017," utshilo uNatalie Bowman, umphathi weAlaska Airlines kwezophawu kunye nonxibelelwano kwezentengiso. "Kuyasivuyisa ukubonisa ikratshi lethu kwii-35,000 zeenyawo ngale nqwelomoya ijongeka inqabileyo, kwaye sinqwenelela iqela ithamsanqa njengoko ngethemba lokubaleka nzulu kwimidlalo yokudlala."
Inqwelomoya-ephefumlelweyo yenqwelomoya kunye nokubhoda kwangoko ziphakathi kweendlela ezininzi iAlaska ibenza banzi ubukho bayo eBay, indawo yayo yesithathu ngobukhulu.